China TCRS Series Rotary Separator Kugadzira uye Fekitori | Chinatown
Inoshandiswa zvakanyanya mumapurazi, zvigayo, zvitoro zvezviyo uye zvimwe zvivakwa zvekugadzira zviyo.
Inoshandiswa kubvisa tsvina isina kuchena yakadai sehundi, guruva nezvimwe, tsvina dzakadai sejecha, mbeu dzesora diki, tsanga dzakapetwa uye zvinosvibisa sadza, matanda, matombo, nezvimwewo kubva kuGirosi.
Inoshandiswa zvakanyanya mumapurazi, zvigayo, zvitoro zvezviyo uye zvimwe zvivakwa zvekugadzira zviyo
Inoshandiswa kubvisa tsvina isina kuchena yakadai sehundi, guruva nezvimwe, tsvina dzakadai sejecha, mbeu dzesora diki, tsanga dzakapetwa uye zvinosvibisa sadza, matanda, matombo, nezvimwewo kubva kuGirosi. Mamiriro:1.Thanks kune yakagadzika simbi sisitimu, hapana vibration uye ine simba mitoro kana muchina uchimhanya; 2.Simple uye simbi-yakasimba kuvaka inovimbisa kuvimbika; 3.Zvikamu kubva kune vanotungamira maChinese vagadziri kana International Brand; 4.Recycling mhepo yekuparadzanisa system haidi yekuwedzera kumisikidzwa kweiyo fan, dutu uye mweya kuchenesa; 5.Yakaderera yezviyo yakakuvara inoita kuita kwakakwana kuita mumbeu yekuchenesa system; 6.Kuchenesa kwakaringana kwezviyo zvakanyorova uye zviyo zvakasvibiswa nembeu yemasora; 7.Zve nyore kushandura dhiramu kona kubva 1о kusvika 5о; 8.Kind yehukuru hwechibhakera cheseji yekuvhura ita muchina wacho wakakodzera mhando dzezvinhu zvakasvibirira uye kushandiswa kwakasiyana siyana 9.Mhando yakakomba yevaparadzanisi vechinodiwa kugadzirwa inoita kuti isarudze yakanyanya kunaka sarudzo yekuchenesa zviyo.
Technical Paramende Rondedzero:
Simba re electromotor rinoratidzwa pamwe nekuisirwa kweparadzanisa neyakavharwa kutenderera kwemhepo ASO
Simba re electromotor rinoratidzirwa pamwe nekumisikidza kweparadzanisa neakavhurika kutenderera kwemhepo ASR Cherechedzo: Zvinofanirwa kuve kuti tinochengetera kodzero yekuchinja zvirimo mukatalog iyi chiziviso chisati chaitika.
Pashure: Kufura Kusanganisa
Zvadaro: Hupfu chisanganiso
Otomatiki Dampening System
TSYZ Gorosi Pressure Dampener